Siilaanyo: Soomaaliya dowlad nooma ahan - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Siilaanyo: Soomaaliya dowlad nooma ahan
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 30 Janaayo, 2013, 13:22 GMT 16:22 SGA
Madaxweynaha Somaliland, Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya aanay dowlad u ahayn isla markaana xukumin Somaliland. Somaliland oo goosatay 1991 weli ictiraaf caalami ah ma helin.
Madaxweyne Siilaanyo waxa uu hadal ka jeediyay labada aqal
Madaxweynaha Somaliland, Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya aanay dowlad u ahayn isla arkaana xukumin Somaliland.
Hadalkan ayaa Madaxweynuhu waxa uu ka sheegay mar uu maanta khubda u jeediyay labada aqal ee baarlamaanka Somaliland.
Madaxweyne Siilaanyo waxa uu sheegay inay ku hawlan yihiin horumarinta wax uu ugu yeeray dalkeena iyo sidii aan aqoonsi uga heli lahaayeen dunida.
Siilaanyo waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya iyo dadkeeda ay u sheegayaan inay tashadeen oo aanay jirin cid jujuubi karta.
"dowladda cusub ee Soomaaliya waxaan jeclahay inay noo dhaxeyso cilaaqaad wanaadgsan." ayuu yiri Madaxweynuhu.
Madaxweynaha Somaliland ayaa sheegay in ictiraafka Mareykanka ee Soomaaliya aanay quseyn Somaliland.
Siilaanyo waxa kale oo uu sheegay inuu ka xun yahay go'aanka dowladda Britain ee ahaa inay ka soo baxaan dadka reer galbeedka ah Somaliland, halis ammaan darro awgeed, oo uu ku tilmaamay mid lagu degdegay.
Somaliland oo goosatay sanadkii 1991 weli ictiraaf caalami ah ma helin.